therapy ukutya Chinese - Shijiazhuang YiLing Hospital
therapy ukutya IsiTshayina (ekwabizwa ngokuba unyango isondlo kunye nonyango yokutya) na indlela itye isekelwe kwiinkolelo Chinese ngokuphathelele imiphumo ukutya kwi umzimba womntu, kwaye ezisembindini iingqiqo ezifana ukutya ngomlinganiselo ofanelekileyo. iziyalezo zayo ezingundoqo umxube ngeembono esizwe kunye amagama avela amayeza emveli ase-China.
therapy Ukutya kuye indlela eqhelekileyo kwimpilo phakathi kwabantu elide.
Diet njengoko nxalenye ibalulekileyo ebomini, ubukhulu becala, kuchaphazela impilo yethu. Kuba abantu abaphethwe izifo, ukutya kubaluleke ngakumbi. Ukuze izigulane zethu, yonke imihla izidlo zabo zijolise ekuphuculeni recovery ngokwasemzimbeni, lo gama ngokulungisa umzimba, khon 'ukuze umzimba kubuyiselwa kwimeko esempilweni kakhulu ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka, ukuze kufikelelwe isiphumo unyango olungcono.
therapy ukutya chinese lube nempembelelo entle umhlaza nokunyanga, scleroderma, yoma dystrophy, rheumatism, isifo neuron iimoto, udinwe, isifo seswekile, nephropathy, kunye nezinye iintlobo zezifo ezingapheliyo kunye namatyala kakhulu.